Ani koola galtummaa gaafataa ykn koolagalaadha - Welsh Refugee Council
Ati gaafii koola galtummaa yoo qabaatte ykn koola galaa yoo taate, qaaman waajjira keenya kaardif, Niwpoort,Siwaansii fi Werzhaam itti argamu dhuuftee ogeeyyiwwan keenya dhimma kana irratti hojjetan irraa gargaarsa argachuu nidandeecha.
Akkaataa nuti itti sigargaarru:
Gara kola galtoota haara’a deeggarsi mana jireenyaa, maallaqaa, barumsa fi hojii kennamuufitti deemi.
Guyyaa jimaataa gara wajjira keenya Kaardifi fi Niwupoortitti argamuu deemiti /ESOL/ baruumsa afaan Ingiliffaa namoota afaan biraa dubbatniif kennamu hordofi.
Gorsaa fi gargaarsa akkasumas kaka’uumsa koola galtootaf goonu kan mana dhbeenyummaa dhaf saaxilman, harka qal’eeyyidhaaf mana fi carraa baruumsaa akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa kennudhan.
Karaa Pirojaktii keenya Kaardifitti sochii irra jiruutin gargaarsa maatii haawwanii fi abbootaf dhu kkubsattootaf fi daa’immaniif gargaarsa nigoona.
Waajjira keenya keessaa kan isin gorsuu danda’u tokkooon walqunnamaa.
Teessoo: 120-122 broodwaay, Kaardiif, CF24 inj
Yeroo itti banamu:
Hojjaa duraa: 9:30-12:30 14:-15:30
Hojjaa lammaffoo: 9:30-12:30 14:30-15:30
Kamisaa: 9:30—12:30 14:30—15:30
Tajaajilli ni kennama:
Gara dhaabbta koola galtoota haara’af gargaarsa kennuutitti socho’aa.
Warra koolu galtumma barbaadara.
Barumsi afaan ingiliffaa koola galuu barbaaddotaa fi koola galtootaf ni kennama/Sagantaa Esol hordofaa/
Pirojaktiin ijollee irratti hojjetu/Giddu gala tiriniitii jedhamutti argama-odeeffannoo bal’aan asitti argama/iddoo sochii kana qunnamaa.
Teessoo: 66 godanaa loowar dook,Niwupoorti, NP20 1EF
Yeroo itti banamu
Gara dhaabbta koola galtoota haara’af gargaarsa kennuutitti socho’aa
Warra koolu galtumma barbaadara
Teessoo: Siwaansii YMCA, SW1 5JQ
Teessoo: 33 Daandii Grosveenoor, Werzhaam, LL11 1 BT